के टाउको दुखिरहन्छ ? सावधान हुनसक्छ घातक ब्रेन ट्युमरको लक्षण ! – Krazy NepaL
April 16, 2021 376
काठमाडौँ । टाउको दुख्नुलाई मानिसहरुलाई सामान्य रुपमा लिएका हुन्छन् । तर, घातक रोक पनि हुन सक्ने देखिएको छ । यदि लगातार टाउको दुख्छ भने लापरबाही गर्नु हुँदैन । यो एक भयानक रोक ब्रेन ट्यूमर वा माइग्रेनको संकेत पनि हुन सक्छ । यसका लक्षण हेर्नुहोस्ः
– यदि तपाई आफ्नो शरीरलाई थाम्न सक्नुभएको छैन भने सचेत हुनुपर्छ । तुरुन्तै जाँच गराइहाल्नुपर्छ । यो ब्रेन ट्यूमरको लक्षण हुन सक्छ ।
– यदि तपाईको टाउको लगातार दुख्छ भने माइग्रेन हुन सक्छ तपाईको टाउकोको आधा भाग दुख्ने हुन्छ ।
– आँखा माथिको भाग दुख्छ भने टाउको दुख्छ भन्ने ठानेर लापरबाही गर्नु हुँदैन । आँखा रातो हुनु, आँंखाबाट पानी बग्नु जस्ता समस्या देखिन्छन् ।
– यदि टाउको एक हप्तासम्म भन्दा बढी समयसम्म दुख्छ भने चिन्ताले पनि यस्तो हुने गर्छ । चिन्ता र तनाव यसको मुख्य कारण हो ।
– जब टाउको, नाक र गालाको हड्डीमा लगातार दुखाई हुन्छ।
गर्भवती श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्न सकिन्छ
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (43936)